Ntughari akwukwo VCW-8 Squadron
Ntughari akwukwo VCW-8 Squadron 2 afọ 2 ọnwa gara aga #1077
VCW-8 Carrier Squadron na - achọ F-18 ma ọ bụ F-14 ụgbọelu. Anyị bụ otu obi ụtọ na ọtụtụ afọ nke ụgbọ elu agha ụwa n'oge agha anyị. Anyi nwere usoro mmuta a na-eme ike nke oma ma na-efeghari ugboro ato n'izu.
Anyị na-arụ ọrụ ugbu a na Hawaii na-abuana na RIMPAC, ma na-agafe mmiri ndịda South China iji kere òkè ma na-eduga na Korea.
Lelee anyị, ka anyị mara ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
ma ọ bụ soro ngwa ntinye na weebụsaịtị anyị, chọpụkwa facebook VCW-8 anyị.
Ndumodu ikpe azu: site lharv71.